Umthandazo wokuhanjiswa okugudileyo. ? Yiba nonikezelo oluhle
umthandazo a iparto ngaphandle kweengxaki Banokusinceda ngamaxesha onke kunye nenkonzo elungileyo. Inokusinceda sidlule kweli xesha linzima njengokuzisa ubomi emhlabeni.
Nangona kungabonakali ngathi kwaye abanye abantu bewubona lo msitho ngokwendalo, inyani kukuba yimeko entekenteke apho umama nosana olungekazalwa bahlala besengozini. Ukubanakho ukucela ukuhanjiswa okugudileyo kunokuzisa ukuzithemba kunye noxolo kumama.
Ngapha koko, lo mthandazo uyintuthuzelo yokuthula kwamalungu osapho kuba uyayazi loo nto imithandazo inamandla kwaye ukuba ukuzalwa akuyona into elula, ke ngoko ilungu losapho elisabela emthandazweni linokufumana uxolo nokuzola okunika ukuzithemba kukwazi ukuba nguThixo ngokwakhe obukhathaleleyo bobabini ubomi ngelo xesha.
1 Umthandazo wokuhambisa izinto ngokulula Yintoni injongo yalemithandazo?
2 1) Umthandazo wokuhanjiswa ngaphandle kweengxaki
3 2) Umthandazo kwi-Holy Ramon Nonato yokuzala umntwana (ukuzala okuhle)
4 3) Umthandazo kubafazi abakhulelweyo malunga nokubeleka
5 4) Umthandazo phambi kokuhanjiswa (hamba kakuhle)
Umthandazo wokuhambisa izinto ngokulula Yintoni injongo yalemithandazo?
Injongo yokwenza lo mthandazo ube nokuzalwa kakuhle ikakhulu kukuba bobabini umama nosana olusendleleni bangaphila, Yiba kukuzalwa akukho ngxaki kwaye yonke into ihamba ngokukhawuleza.
Lo mthandazo uqalwa ukususela ekuqaleni kwe ukukhulelwa ekubeni ikwalungiselela uxolo nenzolo kuyo yonke intsapho. Yiya emsebenzini kunye ne engqondweni okanye intliziyo egcwele Yintlungu kuyingozi kakhulu kwaye yiyo loo nto lo mthandazo ubalulekile.
1) Umthandazo wokuhanjiswa ngaphandle kweengxaki
"Mariya, mama wothando oluhle, Ntombazana entle yaseNazarete, Wena ubhengeze ubungangamsha beNkosi kwaye uthi" ewe ", uzenze umama woMsindisi wethu nomama wethu: Mamela namhlanje kwimithandazo yam
Ngaphakathi kwam ubomi obutsha bukhula: omncinci oza kuzisa ulonwabo kunye novuyo, ukukhathazeka kunye noloyiko, ithemba lonwabo Ikhaya lam. Yinyamekele kwaye uyikhusele, ngelixa mna ndiyithwele esifubeni sam.
UMongameli wethu woLindela okumnandi, banike uthando lwakho kunye nesibindi. Amen. "
Kuya kufuneka umthandazo wokuthemba ukuhanjiswa ngaphandle kobunzima.
Iingxaki ezipheleleyo umsebenzi Yinto enokwenzeka ukuba wonke umama utyhileke kuyo.
Ngena le nkqubo ivela kwisandla seNkosi uThixo unamandla onke, uqinisekile ukuba umthandazo unamandla kwaye uThixo ngokwakhe kunye neNtombi Enyulu uMariya uya kubakhathalela bobabini ubomi kule nkqubo.
Kuyadingeka ukuzola kwaye ube nomonde wokulinda yonke into ukuba ifezeke. Unamandla kwaye kuye akukho zinokwenzeka, uhlala ezimisele ukusiphulaphula nokusinceda ngamaxesha onke.
2) Umthandazo kwi-Holy Ramon Nonato yokuzala umntwana (ukuzala okuhle)
“Owu umxhasi ophakamileyo, Saint Ramón, imodeli yesisa yabasweleyo nabasweleyo, apha undithobe ngokuzithoba phambi kweenyawo zakho ukucela uncedo lwakho kwiimfuno zam.
Kanye njengokuba yayilulonwabo lwakho olukhulu ukunceda abantu abahluphekileyo nabasweleyo emhlabeni, ndincede, ndiyakuncoma, wena-Holy Ramon ozukileyo, kule ngxaki yam.
Kuwe, umkhuseli ozukileyo ndiza kusikelela unyana endimphatha esifubeni sam.
Ndikhusele mna kunye nomntwana kwii-guts zam ngoku nakwixesha elizayo.
Ndiyakuthembisa ukuba uza kumfundisa ngokwemithetho nemiyalelo kaThixo.
Mamela imithandazo yam, sithandwa sam, San Ramón, kwaye undenze umama owonwabileyo wonyana ukuba ndiyathemba ukuba uza kukuzala ngokuvuma kwakho okunamandla.
ISan Ramón Nonato yaziwa njengengcwele yabafazi abakhulelweyo. Uba ngumlamli wezinto ezinzima kuba ebomini bakhe kuye kwafuneka aqhubeke kwiimeko ezininzi ezinzima ezoyisa zonke kwaye esebenzela iNkosi. Ukushumayela ivangeli nokunceda abasweleyo yinto eyayihlala iyimpawu kuye. Ukuza kuthi ga namhlanje uhlala ungumncedi othembekileyo kula maxesha apho kukho amaxhala kunye noloyiko oluninzi.
3) Umthandazo kubafazi abakhulelweyo malunga nokubeleka
“Ntombikazi enguMariya, ngoku ndiza kuba nguMama njengokuba wawunjalo, ndinike intliziyo efana neyakho, iqinile kuthando lwayo olungagungqiyo ekuthembekeni kwayo. Intliziyo enothando ebonakala ithambile kwaye ayivumi ukuzinikela kwabanye.
Intliziyo ... ithambile ikwazi ukubeka uthando kwiinkcukacha ezincinci kunye neenkonzo ezithobekileyo. Intliziyo ecocekileyo ngaphandle kokubonakala ngocoselelo, ngokuvulekileyo, ukonwabela ukonwaba abanye. Intliziyo emnandi nelungileyo engagwebi mntu kwaye ingaze iwaxakeke amxolelo nokuthanda.
Owu Thixo, ulubonakalisile uthando lwakho kumkhonzi wakho uSamonon Nonato, ngokumenza aphile ngendlela ebalaseleyo kwaye wamenza njengomkhuseli kuthi thina abaza kuba ngoomama; ngemfanelo zakho kunye nokuthandazela ndiyakucela ukuba ubomi obutsha obukhulele kum bufike ngovuyo ukonyusa inani labantwana bakho.
NguKristu iNkosi yethu.
Umthandazo kubafazi abakhulelweyo malunga nokubeleka unamandla amakhulu.
Xa umntu obhinqileyo ekhulelwe, ixesha lokuzalwa, nangona licwangcisiwe, lingaphela limangalise lonke usapho kwaye yiyo loo nto kufuneka sihlale siwukhumbula lo mthandazo ukhethekileyo wexesha lokuhanjiswa.
Kumama kunjalo Isizathu sokuzithemba nokuzola unesivakalisi esinokuphindwa Ngexesha lenkqubo yokuzalwa okanye usapho lusenokwenza lo mthandazo ngelixa belinde.
Singacela ukuhanjiswa kube ngokukhawuleza, ukuba akukho ntlungu ukuba yonke into ihamba kakuhle nezicelo ezingapheliyo ziya kuba ngokwemfuno zomntu ngamnye kodwa ngokholo olukhulu ukuba impendulo izakuza.
4) Umthandazo phambi kokuhanjiswa (hamba kakuhle)
"Nkosi, Bawo Somandla! Usapho lelona ziko lidala loluntu, indala njengendoda ngokwakhe.
Kodwa, kuba eli liziko lakho kwaye ekuphela kwendlela umntu anokuza ngalo kweli lizwe aze aphuhlise ngokupheleleyo, amandla obugwenxa ayayihlasela, ebangela amadoda ukuba alidele eli ziko lisisiseko lempucuko. UmKristu
Kumsindo wabo wokuzibulala bajonge ukwenza isibetho sokufa kwiintsapho. Masingabavumeli ukuba baphumelele kuloo msebenzi umnyama, Nkosi, kulaa macebo atshabalalisayo usapho lwamaKristu.
Ngesibongozo esizukileyo somkhonzi wakho uSan Ramón Nonato, igqwetha elikhuselayo ezulwini lolonwabo, intlalontle kunye noxolo lweentsapho ezingamaKristu, siyakucela ukuba uyiphulaphule imithandazo yethu.
Ngobungcwele bale ngcwele, mlathisi wethu, wasinika ukuba amakhaya angasoloko emodareyithwa ngokulandela iNtsapho eNgcwele yaseNazarete.
Ungavumeli utshaba lobomi bosapho lobuKristu luphumelele ekuhlaseleni kwabo ngokunganyamezelekiyo, kodwa endaweni yoko, baguqulele enyanisweni ukuze kuzukiswe igama lakho elingcwele.
Ihlabathi Okomoya yinyani ekufuneka siyazi ngalo lonke ixesha. Ukulungiselela yonke into ngalo mzuzu wokuhanjiswa kubandakanya impilo yethu yokomoya kuba kulapho iimvakalelo okanye iimvakalelo zihlala khona ezinokuthi zisenze sizive kakubi okanye sityhafile embindini womzuzu ubuthathaka, uyingozi kwaye ungummangaliso njengokuzalwa kobomi obutsha.
Phambi kokuba siziswe singenza imithandazo kunye nosapho, nabazali bomntwana kunye nabahlobo abaziva ngathi bajoyine umthandazo onokwenza umahluko ngokulungileyo phakathi kokuzalwa. Imithandazo inamandla ukuba yenziwe ngokholo kwaye isuka entliziyweni kwaye awukho umthandazo onyanisekileyo ngaphezu kwalowo ungutata okanye ongumama wabantwana babo.
Hlala unokholo ku Umthandazo wokucela kunye nokuhanjiswa kakuhle ngaphandle kwengxaki.
izigaba Injongo, Santos Ukuhamba kwetikiti